अब प्रादेशिक कार्यालयमा पनि हामी जानैपर्छ : बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको अन्तर्वार्ता | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Wednesday, 20 February, 2019
अब प्रादेशिक कार्यालयमा पनि हामी जानैपर्छ : बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको अन्तर्वार्ता
personएलिजा उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २, २०७५ chat_bubble_outline0
मोटर बिमामा उपचार खर्चलाई बढाएर ५ लाखभन्दा बढी बनाउन सक्दैनौँ
बिमा समितिमा अध्यक्षका रूपमा चिरञ्जीवी चापागाईंको आगमन भएको डेढ वर्ष भयो । ७० वर्षको इतिहासमा ७ प्रतिशतमात्र बिमाको पहुँच रहेकोमा त्यसलाई डेढ वर्षमै ३ प्रतिशतले बढाएर १० प्रतिशत पुगेको छ । असारसम्म ११ प्रतिशत पुग्ने अध्यक्षको दाबी छ । यता लामो समयसम्म रोकिएको बिमा कम्पनीको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया पनि सम्पन्न भएको छ । अब नयाँ कम्पनीलाई अनुमति नदिने अडानमा समिति छ । यता बिमा कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन पनि छ । बिमाको पहुँच वृद्धिकै लागि तालिम सेन्टर र पाठ्यक्रममा बिमालाई राख्ने विषयमा समितिले काम अघि बढाएको छ । बिमाको पहुँच, यातायातको सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै भङ्ग भएको समितिले बेहोर्दै आएको (मोटरबिमा अन्तर्गतको ३ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लागेमा ३ लाख बिमा र सोभन्दा बढी समितिले बेहोर्ने गरेको थियो ।) रकम अब कसले बेहोर्ने अर्थात मोटर बिमा संशोधनको तयारी लयागत विषयमा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी ः
तपाईं बिमा समितिमा आउनुभएको एक÷डेढ वर्ष भयो ।सुरुमा आउँदा बिमाको पहुँच र जीडीपीमा यसकोे योगदान बढाउँछु भन्नु भएको थियो । यसबीचमा त्यसको प्रगति कति भयो ?
हो, मैले विभिन्न किसिमबाट उल्लेख्य जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुग्नेगरी काम गर्छु भनेको थिएँ । म आएको लगभग डेढ वर्ष भयो । यो बीचमा जति काम भयो, त्यसको नतिजा विस्तारै देखिँदै गएको छ । ७० वर्षसम्म ७ प्रतिशतमात्र बिमाको पहुँच रहेकोमा डेढ वर्षको अवधिमा ३ प्रतिशत पहुँच थपिएर १० प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो तथ्याङ्कले असारसम्म ११ प्रतिशत पुग्छ भनेको छ । डेढ वर्षको अवधिमा बिमा गर्ने मान्छेको कभरेज ४ प्रतिशतले बढ्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने कहाँँ पुग्छ, तपाईं आफै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको समय०७५ असार मसान्तसम्म दिइएको छ, यस समयमा सबै बिमा कम्पनीले तोकिएको पुँजी पु¥याउलान्?
अहिलेसम्मको हिसाबले सबैले पु¥याउँछु भन्नु भएको छ । हाम्रो निर्देशिकामा असारसम्ममा पु¥याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो समयसम्मपु¥याउन नसक्ने अवस्था भएमा ३÷३ महिना गरेर दुई पटक समय थप गर्न सक्ने अर्थात पुष मसान्तसम्म पु¥याउने समय छ । असारसम्म नभएपनि पुससम्म हामी हेर्छौं । धेरैजसोले पु¥याउँछन् जस्तो लाग्छ ।उनीहरूको पुँजी वृद्धि योजना हेर्दा पु¥याउनुहुन्छ ।
तोकिएको समयमा पुँजी पु¥याएन भने के हुन्छ ?
बिमामा असामान्य अवस्था आएछ भने त्यो सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ । होइन भने पुस मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्छ ।
तपाईं आएपछि लामो समय रोकिएको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया अघि बढ्यो, अब बिमा कम्पनीहरू पुगेको हो?
बिमा क्षेत्रमाजम्मा सात प्रतिशतको पहुँच छ । बिमा गाउँगाउँ पुगेका छैनन् । पुँजी पनि कम छ । त्यसकारण बिमालाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेरलाइसेन्सिङ ग¥याँै । त्यसको आलोचना भएको थियो ।त्यसपछि बिना अनुसन्धान, बिना अध्ययन अर्को व्यवस्था नभएसम्म लाइसेन्स दिदैनाँै भन्यौँ । अहिले यो प्रक्रिया बन्दछ । नेपाल सरकारले नौवटा जीवन बिमाको लाइसेन्सिङ ग¥यो र उहाँहरूको निर्देशन अबदेखि क्रमिक रूपमा लाइसेन्सिङलाई कम गर्दै लैजाने भन्ने आयो । अब बिमा समितिले लाइसेन्सिङ गर्दैन । केही समय यही लाइसेन्सिङले पुग्छ ।
तपाईंले गाउँ–गाउँमा बिमाको पहुँच पु¥याउन बिमा कम्पनीको सङ्ख्या बढाउनु प¥यो भन्नुभयो । अझैपनि बिमा सहर केन्द्रित छन् भन्ने तथ्याङ्क तपाईंहरूसँगै छ । ६० प्रतिशत बिमा शुल्क यहीँबाट उठ्छ । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
हो तपाईंले भनेजस्तै बिमा गाउँ–गाउँ पुगेको छैन । हाम्रो नीति पनि जति कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दियाँै र उनीहरूले जुन—जुन ठाउँमा आफ्ना शाखा खोल्न अनुमति माग्नुभएको छ त्यसमा शाखा खोल्न दिएका छौँ र यो असार मसान्तसम्म त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिन्छौँ । त्यसपछि असार मसान्तमा कटअफ डेट रोखर कुन कम्पनीको कहाँ कति शाखा छ, गाउँमा कहाँकहाँ पुगेको छ भनेर म्यापिङ गर्छौं । अब बिमा कम्पनीहरूले बाँकी गाउँमा जान चाहेनन भने त्यतिबेला हामीले बलपूर्वक गाउँमा पठाउने खालका नीति ल्याउँछौँ । अर्कोतिर प्रत्येक स्थानीय तहमा बैङ्किङ पहुँच पु¥याउनुपर्ने नीति छ । त्यो नीतिअन्तर्गत रहेर असार मसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा पुग्छन् । अहिले कर्मसियल बैङ्कसँग बिमा कम्पनीहरूले बैकांसुरेन्स गरिरहेका छन् । त्यहाँ कर्मसियल बैङ्क पुगेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा बैङ्कासुरेन्स मार्फत शाखा त्यहाँ पुग्छ नै । यी दुई वितरण माध्यमलाई हामीले प्रयोग गर्छौं र गाउँगाउँसम्म पु¥याउँछौं ।
तपाईंले भनेजस्तो बैङ्कासुरेन्स त लागू भएको छैन तर किन बैङ्कासुरेन्स भनेर प्रचार प्रसार गरिहनुभएको छ?
तपाईंले भनेजस्तै यो बैङ्कासुरेन्स होइन । लागू पनि भएको छैन । यो कर्पोरेट एजेन्सी हो । बैङ्कासुरेन्स आधुनिक वितरण प्रणाली हो । बिमाको वित्तरण प्रणालीमा परम्परागत र आधुनिक उपागम छन् । परम्परागत माध्यम भनेर व्यक्तिगत अभिकर्तामार्फत हुन्छ । यसको अभ्यास नेपालमा हुँदै आएको छ । विकासको माथिल्लो चरणमा पुगेका देशहरूमा बैङ्कासुरेन्स मार्फत सोझै बैङ्कले नै बिमाका पोलिसीहरू आफ्नो डेक्सबाट बेच्छ । बिमा कम्पनीको सफ्टवेयर बैङ्कमा पनि पुग्छ । उसले बैङ्कबाटै अपलोड गरिदिन्छ । हामीले त्यो व्यवस्थाको विकास गरिसकेका छैनाँै । बैङ्कासुरेन्स लागू गर्न छुट्टै निर्देशिका बनाउनुपर्छ । यसैगरेर राष्ट्र बैङ्कले पनि मौद्रिक नीतिमा बैङ्कासुरेन्स गर्नसक्छ भन्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी दुई काम नहुन्जेल अहिले बिमा कम्पनीले बैङ्कासुरेन्स भनेर जुन लैजानु भएको छ, त्यो पोलिसी सबैको बोकेर बिमा कम्पनीमा जाने हो । काम गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई बैङ्कासुरेन्स किन नभन्ने भनेर हो । वास्तवमा त्यो बैङ्कासुरेन्स भने होइन ।
बैङ्कासुरेन्स लागू गर्न तपाईंहरू र राष्ट्र बैङ्कबीच छलफल भएको छैन?
व्यक्तिगत अभिकर्ताबाट यसको विरोध भएको छ । बैङ्कासुरेन्स लागू गरे हामी विस्थापित हुन्छांै भनिरहेका छन् । अबको दिनमा व्यक्तिगत अभिकर्ताले बैङ्कासुरेन्स आयो भने पनि म कसरी सस्टेन हुने भनेर आफूलाई विकास गर्नुप¥यो । राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्था ग¥यो भने उहाँहरूको विरोधका बाबजुत पनि काम रोकिन्न ।
बिमाको अवारनेसका लागि पाठ्यक्रममा बिमा र तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भन्नुभएको थियो, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हामीले सबै बिमा कम्पनीको २÷२ लाखको दरले ७८ लाख र बिमा समितिले २२ लाख गरेर एक करोडको सिडमनी फन्ड राखेर त्यसलाई बैङ्किङ प्रवद्र्धन कोष भनेर खोल्यौं । अब त्यो कोषले ट्रेनिङ सेन्टर कसरी चलाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेर आगामी आथिक वर्षदेखि कम्पनी मोडलमा जान्छ । कम्पनी मोडलमा जानुभन्दा अगाडि त्यही कोषले इन्स्टिच्युटको सबै काम गर्छ । कसलाई कस्तो तालिम दिने भनेर कोर्ष डिजाइन हँुदैछ । आगामी आर्थिक वर्षबाट तुरुन्त सुरु गर्छांै । काम धेरै अगाडि बढेको छ । विस्तारै त्यो तालिम सेन्टरलाई एकेडेमीकारूपमा रूपान्तरण गर्छौं ।विश्वविद्यालयमा पढाइको विषयमा एउटा रोस्टर तयार गरेका छौं। त्यो फाइनलाइज हुँदैछ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सकिनेवित्तिकै युनिभर्सिटिको सरहरू बोलाएर छलफल गर्छौं ।
एउटा मात्र तालिम सेन्टरले प्रादेशिक तहमा कसरी उपस्थिति जनाउँछ ?
प्रदेशमा गएर तालिम आयोजना गर्छ तर त्यहीको जनशक्ति प्रयोग गर्छ । जुन प्रदेशमा तालिम गर्नुपर्ने त्यहाँ एउटा बिमा कम्पनीलाई समन्वय गर्न लगाएर तालिम सेन्टर चलाउनका लागि त्यहीँको जनशक्ति प्रयोग गर्छांै । यहाँँबाट सचिवालय गएर गरिदिन्छ ।
बिमाले आफूलाई सङ्घीयतामा कसरी ढालिरहेका छन् ?
संविधानमा बिमाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई साझा सूचीमा राखेको छ । सङ्घीय सरकारले पनि चलाउने र प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । संसारको धेरैतिरको मोडालिटी हेर्दा लाइसेन्सिङ जहाँपायो त्यहीँबाट गर्ने कुरा पनि हँुदैन । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं । यो ड्राफ्ट फाइनालाइज हँुदैछ । यसमा लाइसेन्सिङलगायतका काम केन्द्रीय तहबाट अर्थात बिमा समितिबाटै हुन्छ । अभिकर्ताको लाइसेन्स उनीहरूको नवीकरण, क्षेत्रीयस्तरका तालिम केन्द्रहरू, प्रदेशको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यहाँको काम प्रदेश कानुन अनुसार हुने भनेर हामीले ऐन बनाइरहेका छौँ । प्रादेशिक कार्यालयमा पनि हामी जानैपर्छ ।
यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै अब मोटर बिमामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । के भइरहेको छ ?
यसको विषयलाई लिएर यातायातका महानिर्देशकसँग प्रारम्भिक छलफल भएको छ । छलफलमा ३ लाखको औषधि उपचार खर्च र ५ लाखको मृत्यु बिमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिछ । यसलाई बराबर अर्थात ५ लाख रूपैयाँसम्म पु¥याउने भनेर हामीले सहमति गरेको हो ।तर, यातायात व्यवसायीहरूको माग के छ भने औषधी उपचार खर्च असिमित हुनुप¥यो । हामी असिमित गर्न सक्तैनौँ । किनभने हामीसँग क्यासलेस उपचार अर्थात स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम नगरुन्जेल क्यास दिन थालियो भने हाम्रो कार्यक्रम कहाँ पुग्छ कहाँ । जसले जे पनि प्रमाणित गरिदिन्छ, त्यसकारण अनलिमिटेड हुँदैन । हाललाई सीमित बनाउन सकिन्छ । दोस्रो क्यासरहित बनाइसकेपछि असीमित गराउन सकिन्छ । क्यासरहित बनाउनका लागि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ । त्यसले बिमा कम्पनी र बिमित बीचमा पुलको काम गर्छ ।सफ्टवेर बनाउँछ । आफ्नो विद्युतीय कार्ड पनि दिन्छ । हस्पिटल लिस्टिङ गर्छ । हस्पिटलको बिल थर्डपार्टीलाई दिन्छ र थर्ड पार्टीले चेक दिन्छ । डक्टरले सही वा गलत बिल के हो सबै चेक गरिदिएपछि त्यसका आधारमा बिमा कम्पनीले भुक्तानी गरिदिन्छ । यस्तो अवस्था नबनाउन्जेल हामीले असीमित बनाउन सक्दैनाँै । यो बनाउन थर्डपार्टीको लाइसेन्सिङ गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । अहिले बिमा कम्पनी, सर्भेयर, एजेन्ट, दलाललाई लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था मात्र छ ।
तपाईंहरूले पनि सीईओलाई कुलिङ पिरियड लागू गर्नुभयो, केही समयअघि राष्ट्र बैङ्कले पनि लागू गरेको थियो, यो किन आवाश्यक प¥यो ?
राष्ट्र बैङ्कको कपी बिमा समितिले ग¥यो भन्न पाउनुहुन्छ ।कर्पोरेट गर्भनेन्स भनेको जहाँसुकै उस्तै हुन्छ । मैले पहिले सोचेको थिएँ । तर राष्ट्र बैङ्कले पहिला लागू गरेकाले उसको फलो गरेको जस्तो देखियो । हामीले धेरै सीईओ नभएकाले डेपुटी सीईओ अनिवार्य ग¥यौँ ।सीईओपनि अनिवार्य गर्छौं ।कर्मचारी विनियमावली र आर्थिक प्रशासन विनियमावली बिमा समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था सुशासन निर्देशिकामा गरेका छौं । कर्मचारी विनियमावलीको मार्गदर्शन हामीले बनाउँदैछौँ । मार्गदर्शन दिनेवित्तिकै उहाँहरूको सीईओ भनेको करारमा हुन्छ । बाँकी कर्माचारी नियमावलीले निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । हरेक ३९वटै कम्पनीमा डेपुटी सीईओको व्यवस्था हुन्छ । यसमा आधारभूत रूपमा तलब, भता तथा सुविधा श्रम ऐनले निर्देशन गरेबमोजिम हुनुपर्छ । बिदा, नियुक्ति, कति वर्षमा प्रमोसन हुनेलगायतका कुरा तोकिनेछ ।
बिमा समितिको अबको फोकस केमा हुनेछ ?
बिमाको पहुँच गाउँगाउँसम्म पु¥याउने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेका र न्यून आयस्तर भएकालाई लघुबिमा मार्फत बिमाको छाताभित्र ल्याउने काम हुन्छ । इन्सुरेन्स बिजनेसमा हामीले त्यो काम गर्न बाँकी छ । निरीक्षण सुपरीवेक्षेणलाई सशक्त बनाउने, हामीसँग जीवन र निर्जीवन बिमा गरेर १८० अर्बको फन्ड सिर्जना भएको छ । ती सबै कम्पनीको समयमै निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने हो ।
' यो वर्ष एटीआर विमान थपेर अझ स्तरीय सेवा दिने लक्ष्य छ '
स्थानीय तहसँग कसरी अघि बढ्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ : टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी
ढुकुटी रित्तो बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडा पनि जिम्मेवार छन् (दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग अन्तरवार्ता)
मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ : पूर्वगर्भनर डा.रावलको अन्तर्वार्ता
‘कमाए जति सबै कर तिर्यौं भने अरू लगानी कहाँबाट ल्याउने ?’
हामी पूरै ‘हाइटेक’ बैङ्क भइसकेका छौँ : लिलाप्रकाश सिटौला, सीईओ, कृषि विकास बैङ्क
बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या, प्रमाण नष्ट गर्न शव जलाइयो
परिवारबाटै असुरक्षित महिला, एक वर्षमा १२० जनाको हत्या
शौच गर्न जाँदा छोएको निहुँमा कुटिए डोम आमाछोरी
भारतबाट आएका सिकारीले बाँदर समात्न थाले
इराक लैजान लागिएका १७९ नेपालीको भारतबाट उद्धार
७८ लाख घुस लिने पूर्वआयुक्त पाठकमाथि छानबिन सुरु
चेपाङ महिलाको जीवन, २१ वर्षको उमेरमा ४ बच्चा
आन्तरिक लोकतन्त्रको लडाइँमा नेवि संघलाई मेरो साथ छ: प्रधान
नेकपाका शीर्ष नेताहरु धनगढीमा